Golaha Wasiirrada Somaliland oo baaq u jeediyey Saddexda Xisbi iyo Golaha Guurtida - SomalilandPost
Home News Golaha Wasiirrada Somaliland oo baaq u jeediyey Saddexda Xisbi iyo Golaha Guurtida
Golaha Wasiirrada Somaliland oo baaq u jeediyey Saddexda Xisbi iyo Golaha Guurtida
Hargeysa (SLpost)- Shirka toddobaadlaha ah ee Golaha Wasiirrada Somaliland, ayaa lagaga hadlay diyaar-garowga iyo qabsoomidda doorashada Goleyaasha Deegaanka iyo wakiillada oo loo muddeeyey 31-ka May 2021-ka, waxaana talooyin iyo baaq loogu jeediyey axsaabta Siyaasadda.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Afhayeenka madaxweynaha, Golaha Wasiirrada Somaliland waxa ay ugu baaqeen saddexda Xisbi qaran inay u hoggaansanaan shuruucda qabsoomidda doorashooyinka, kuwaas oo ay ugu horreeyaan xulashada murashaxiinta ka qayb-galay tartanka doorashada.
War-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada, ayaa u qornaa sidan:-
“Fadhigii 70aad ee Golaha wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland oo uu shir guddoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, kuna wehelinaayey Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa maanta lagu lafo-guray arrimaha doorashooyinka wakiillada iyo degaanka ee dalka ku soo fool leh.
Ugu danbayntiina Goluhu waxa uu laamaha Amniga ee dalka ku adkeeyey inay xoojiyaan Amniga qaranka, inta lagu jiro u diyaar-garowga doorashooyinka illaa maalinta la dhamaystirayo hawlaha doorashooyinka, siina laban-laabaan dedaalkii ay horeba ugu jireen. Guddi-hoosaadka siyaasadda ee golaha wasiirraduna hubiyaan fulinta qodobbadaas, dersaanna wixii caqabad ah ee ka iman kara, si loo xalliyo.” sidaas ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay.